Filohan’ny federasiona baolina Kitra: hatao ny 24 aogositra ny fifidianana | NewsMada
Filohan’ny federasiona baolina Kitra: hatao ny 24 aogositra ny fifidianana
Afaka ny ahiahin’ny mpitia baolina kitra rehetra, fa hotanterahina ny volana aogositra, ho avy izao, ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona (FMF). Nisokatra nanomboka omaly ny filatsahan-kofidina.
Tapaka nandritra ny fivoriambe tsy ara-potoana faharoan’ny “comité de normalisation”, natao tetsy amin’ny Carlton Anosy, omaly, fa hotanterahina ny asabotsy 24 aogositra ho avy izao, ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona malagasin’ny kitra (FMF). Lany ary neken’ireo filohan’ny ligim-paritra ny nametrahana fehezan-dalana manokana, hitondrana ny fifidianana. Nambaran’i Atallah Béatrice, filohan’ny “comité de normalisation” fa tsy nanova ireo rijanteny sy ny sata, tao anaty lalam-pifidianana, ny mpivory. Miandry ny fankatoavan’ny federasiona iraisam-pirenena, sisa.
Nisokatra nanomboka omaly 12 jona, araka izany ny fandrotsahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina, ho an’ireo kandidà, izay hifarana ny 12 jolay, amin’ny 5 ora hariva. Mila ny fankatoavan’ireo ligy telo ny kandidà, ho filohan’ny federasiona raha roa kosa ny an’ny komity mpitantana. Ny 1 aogositra, no hanambarana ny anaran’ireo kandidà rehetra ary ny ampitson’io, ny antsapaka ho an’ny filaharana ao anaty biletà tokana. Ny 8 – 22 aogositra, ny fampielezan-kevitra ary ny 24 aogositra ny fifidianana, izay tsy mbola voafaritra ny toerana, hanatanterahana, azy. Hivoaka, ny 1 septambra, ny vokatra ofisialy ary ny 2 septambra, ny famindram-pahefana eo amin’ny “comité de normalisation” sy ny filohan’ny FMF, vaovao. Mialoha izany, hotontosaina, rahampitso zoma 14 jona, ny fifidianana izay ho filohan’ny seksiona Tsiroanomandidy, ary ny 10 jolaly ny an’ny ligin’i Bongolava.